Warshadaha Qurxinta Indhaha, Alaab-qeybiyeyaasha - Soosaarayaasha Qurxinta Indhaha ee Shiinaha
Shahaadada Labbarka Gaarka ah ee loo yaqaan 'Eyeshadow' midab midabkeedu yahay midab aan biyuhu biyuhu ka madhnayn oo ah midabka 'Pearlescent Sequined Glitter Eyeshadow Palette'
Shayga NO J0877 Brand Jinfuya ama Samee Qaabkaaga Nooc budada ah oo nooc ah, 35 midab oo kala duwan, leh midab jilicsan, midab dhalaalaya, iwm, waa hagaag iyo raaxo, fudud in la isku qurxiyo Waxay ku habboon tahay 35 midab oo inta badan u dhigma dhammaan maqaarka midabkiisa. Way fiican tahay iyo raaxaysi, fududahay in la qurxiyo.Matooyinka qabow iyo palette indha-sarcaadka dhalaalaya oo ku habboon maalin kasta ama habeynkii la isticmaalo. Macluumaadka Saafiga ah ee 305g / sariirta Waxqabadka Qurxinta Indhaha ee Indhaha Haweenka. Waxaan balanqaadeynaa vegan iyo 100% CRUELTY-FREE bilaash ah oo ku saabsan OEM ...
Calaamadda Gaarka ah ee Muddada Dheer ee Libaax Bixiyaha Eyeshadow 14 Midab Biyo Indha Indhabeer ah oo Dareera Laydh Heer Sare leh.
Waa maxay ? Shaashadda indhaha ee dareeraha ahi waa mid saamayn sare leh, oo hadh dareere dhalaalaysa oo aad u sareysa taas oo ku siinaysa midab ballaadhan oo mug leh iyo saamayn dhinacyo badan leh. Ka dabiici badan budada hooska isha, si dabiici ah ula xiriir maqaarka, saameynta qurxinta indhaha ee bilaa cillada ah. Ku hel indho indheysan oo indho sarcaad leh oo leh muraayad indho-indheyn ah oo hal-marin leh oo leh indha-indheynta dareeraha dareeraha ah, oo loo qaabeeyey dhar raaxo leh, hoos u dhac yar iyo saameyn sare; oo isticmaal faraha ama buraashka indhaha indhaha oo iskiis u dalbo si muuqaal jilicsan, ama haye ...
Shimmer Liquid Eyeshadow Vegan Makeup Indhaha Indhaha Cosmetics 18 midabo Label Gaarka ah Shaning Liquid Glitter Eye hooska
Waa maxay ? Midabka hooska isha iyo iftiinka buuxa, qoto dheer adag, duufaanta fudud ee dawakhsan, midab isku mid ah, qalalan oo cufan. Dareenka wanaagsan ayaa leh midabyo kala duwan oo laga kala xusho. Hooska dhalaalaya dareeraha dhalaalaya ayaa kufiican inuu kaligiis xirto ama uu ku dhexjiro midabada kale, taas oo si wax ku ool ah u iftiiminaysa muuqaalka indhaha oo kaa dhigaya inaad noqoto qof indhaha ku qabta munaasabad kasta. Iyada oo leh dareemo aad u adag oo la dareemay, waxay u socotaa si isdaba-joog ah oo habsami leh, si dhakhso leh ayey u qallajisaa, abuurista il-jilicsan oo soo jiidasho leh Eyeliner & eye sh ...